Nke a Train Bridges bụ ihe ịrịba ụkpụrụ ụlọ ijuanya. Ị pụrụ ịhụ na isii na nkume nzu arches na-ezu ike na ise elu ogidi. The àkwà mmiri na-eduga ná ozugbo na 216 mita ogologo Landwasser ọwara.
Nke a dị ebube Scottish ịrịba obe osimiri N'Ihu na Queensferry, dị nnọọ n'ebe ọdịda anyanwụ nke Edinburgh.
Ebe ọ bụ na ọ bụ naanị 409 mita ogologo, e nwekwara a ngalaba nke mmiri maka pedestrians na agba ígwè. E nwere otu ọ bụla n'akụkụ nke n'ụzọ ụgbọ okporo ígwè. Ndị mmadụ malitere ịtụkwasị 'ịhụnanya padlocks' on nsu n'etiti okporo ígwè na-agafe agafe ebe kemgbe 2008.
The ụgbọ okporo ígwè viaduct bụ nọmba 31 na ndepụta nke ihe ndị kasị elu n'ụwa ụgbọ okporo ígwè àkwà mmiri. ọ na-anọchi 145 mita elu na dị nnọọ 78 mita ogologo. Ọ na-na nsogbu na njedebe nke Santa Giustina ọdọ in Dermulo, Northern Italy.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/breathtaking-train-bridges-europe/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)